10% Discount For All Item အသေးစိတျ
All Menu 10% Discount ရယူပြီးတော့ YuKi Express မှာ ဂျပန်အစားသောက်တွေ အရသာရှိရှိစားကြမယ်
ဒီဆိုင်လေးကတော့ Budget ဆိုင်လေးအနေနဲ့လည်း ရွေးချယ်ဖို့ အသင့်တော်ဆုံးဆိုင်လေးပါ…
ဂျပန်အစားစာတွေကို စားချင်လို့ ဂျပန်သွားစရာမလိုတော့ဘူးနော်…အရသာကောင်းကောင်း၊ ဈေးနူန်းအသင့်တင့်နဲ့ ဂျပန်အစားသောက်တွေရနိုင်မဲ့ ရေကျော်ဈေးထဲက YuKi Express
ဂျပန် Menu ပေါင်း (70) ကျော်ရနိုင်တဲ့အပြင် Fish Cake၊ Toppoki တွေလည်းရနိုင်သေးတယ်၊ ဂျပန်စတိုင် Salad, Soup, Sushi နဲ့ Japan Set Menu၊ အရသာစုံလင်တဲ့ Japan Ramen လေးတွေကတော့ လူကြိုက်များတဲ့ အစားစားလေးပေါ့..
ဆိုင်ဒီဇိုင်းလေးကတော့ ရိုရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ ဂျပန်ဒီဇိုင်းလေးနဲ့ ထိုင်လို့ကောင်းတဲ့ Decoration ပုံစံလေးဆိုတော့ အေးအေးဆေးဆေး ထိုင်ချင်တဲ့သူတွေအတွက် အတော်လေးအဆင်ပြေတဲ့ ဆိုင်လေးပေါ့..
Yuki Express ဟာဆိုရင် ဂျပန်နိုင်ငံမှတင်သွင်းတဲ့ သန့်ရှင်းလတ်ဆန့်ပြီး အဟာရရှိတဲ့ ကုန်ကြမ်းစ္စည်းတွေကိုသာအသုံးပြုထားပီးတော့ အချိုမှုန့်နဲ့ စားအုန်းဆီကို လုံးဝမသုံးတဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွှတ်ဖို့ အထူးအာမခံပါတယ်…
မင်မင်အကြိုက်ဆုံးအချက်လေးက ဂျပန်အရသာလေးဟာ ကိုယ်တို့ ခံတွင်းနဲ့ နည်းနည်းစိမ်း နေတတ်ပေမဲ့ Yuki Express မှာတော့ မြန်မာ့တို့ အကြိုက်နဲ့ ညီအောင်ပြင်ဆင်ထားတာဆိုတော့ ဂျပန်အရသာကြိုက်တဲ့သူသာမက မြန်မာ့အရသာနဲ့စားချင်တဲ့သူအတွက်ပါ တော်တော်လေး အဆင်ပြေတယ်…
YuKi Express ရဲ့လိပ်စာလေးတွေကတော့
6.5 Mile Marketplace (1st Floor) No.69, 11 Ward, Innyalay, 6.5 miles, Pyay Road,
ဖုန်းနံပါတ် - 09964820720
Yay Kyaw Market (City Mart), Yaykyaw Street.
Phone : 09 964 820 720
9 Mile (Ocean Center), Pyay Road, Mayangon Township, Yangon.
Phone : 09425084603
ဆိုင်ဖွင့်ချိန် -9AM to9PM
ဒီလိုဈေးနူန်းကလည်းသက်သာနေတဲ့ အပြင် B&F Weekly Promotions အသုံးပြုပြီး 10% Off ထပ်ရအုန်းမယ်ဆိုရင်တော့ ရေကျော် Market ရောက်ရင်သွားဖြစ်အောင်သွားလိုက်ကြအုန်းနော်..
Yuki Express ရဲ့ 10% ကိုရယူပြီး မွာသြားရောက်အသုံျးပုခ်င္တယ္ဆိုရင်တော့ B&F Weekly Promotion ရဲ့ Club Card နဲ့သြားရောက်အသုံျးပုပေးရမျွာဖစ္ပါတယ်။ ဆိုင္ကိုရောက္တဲ့အခ်ိန္မွာဆိုရင်တော့ Bill မရွင်းမီ B&F Club Card ကျိုပလိုက်ရုံနဲ့ Promotion ကိုခံစားခြင့်ရပါပြီ။
အသေးစိတ်သိလိုတယ်ဆိုရင်တော့ 09-969910128, 09-969910115 တို့ကို ရုံးချိန်အတွင်းဆက်သွယ်မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။
12 months - 9900 ks
20% Off on total bill at HTI Restaurant & Bar at Bagan
Located onlyafew minutes walk from most of the guest houses and hotels in Nyaung U,"HTI Bar & Restaurant"
10% Off For Afternoon High Tea Set
Peacock LoungeGo by your precious afternoon with full of satisfaction by tasting Afternoon High Tea
10% Off For All Cakes and Pastries Items
Gourmet ShopYou can get homemade pastries, cakes and chocolate by international bakers and also an assortment